June | 2016 | Mgpyinnyar and Win's Wisdom
Monthly Archives: June 2016	knowledge
June 19, 2016 admin	3 Comments
by PAUL RATNER April 19, 2016
3. BETTER JOBS This follows from the previous reason – more intelligent people tend to do better in the workplace. The same studies that have shown higher level of IQs for atheists, also equated that with getting higher-level jobs and higher pay.
Atheists do not start wars or commit acts of terrorism for religious reasons, just to prove their deity is the correct one. On the other hand, Marxist-Leninist atheism at the core of communism has certainly given atheismabad name, but it’s not necessarily an argument that it was atheism itself that led to the repressions and killings. There were complex historical, social and economic reasons for that. Atheists tend to not kill others for the sake of atheism.
Atheists are generally skeptical and tend to look at issues fromarational, often scientific standpoint that demands proof. For an atheist, elements of reality are observable and can be tested. 9. SOCIAL ISSUES
It wouldn’t beaworthwhile list if it didn’t talk about sex. There have been studies that showed atheists having better sex lives than religious people simply due to not feeling guilty about it. Guilt about sex is certainlyastrong feature of some of the world’s religions and the political discourses they generate (particularly in the US).
they generate (particularly in the US). There are also studies out that showagreater satisfaction with sex among the believers, but as it’s also not something they should really focus on and discuss (according to religious tenets), it’s hard to know where their responses are coming from.
Do these reasons mean you should abandon your faith? You make the call. But being an atheist needs not carry any negative stigma inaworld still dominated by believers. Professor of psychology Benjamin Beit-Hallahmi profiledalikely atheist to be this person – “We can say that atheists show themselves to be less authoritarian and suggestible, less dogmatic, less prejudiced, more tolerant of others, law-abiding, compassionate, conscientious, and well-educated. They are of high intelligence, and many are committed to the intellectual and scholarly life.” That sounds likeapretty good person.
Buddhism and their thought
Buddhism and their opinion
ဗုဒ္ဓသည် တပည့်သာဝကတို့အား ငုတ်လျှိုးနေသော လူ့စွမ်းအားများကို လေ့ကျက်တိုးပွားစေခဲ့သည်။ သီအိုရီများ ယုံကြည်ချက် သက်သက်နှင့် ရိုးရာအလေ့အကျင့်ဖြင့်သာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံဖြင့် ဟောဖော်ခဲ့သည့် ထာဝရချမ်းသာ ကို တွေ့ရှိရန် အသိမဲ့သတ္တ၀ါတစ်ဦးအား အစေခံသဖွယ် သဘောမထားဘဲ စိတ်စွမ်းအားနှင့်အသိဥာဏ်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်ရန် ပြသခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများသည် ဘာသာရေး အမှတ်တံဆိပ် ခတ်နှိပ်ရန်မလိုဘဲ မည်သူမဆို လေ့ကျင့်နိုင်သည်။
အောက်တွင် ယနေ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှ တတ်သိပညာရှင်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ထင်ရှားသော တွေးခေါ် ပညာရှင်များ၊ သမိုင်းပညာရှင်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ စာရေးဆရာများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အဆို အမိန့် များကို စုစည်းဖော်ပြထားသည်။ သူတို့အဆိုအရ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လက်တွေ့အကျဆုံးနှင့် ကြောင်းကျိုးအညီညွှတ်ဆုံးသော ဘာသာ တရား ဖြစ်သည်။ တိကျခိုင်မာသည့် အသိပညာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လျော်ကန်စွာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ၀န်ဆောင်မှုကို အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပေမည်။
ဤစာစုများကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ သာလွန်မြင့်မြတ်မှုကို ပြလိုရင်းမဟုတ်ဘဲ ပညာရှင်အသီးသီး၏ အဂတိကင်းသော အမြင်များကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓတွင် အားလုံးသော ဟောပြောချက်များ၊ တရားသေ အယူဝါဒများထက် ပိုမိုမြင့်မြတ်သည့်အရာ တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမတော်သည် လူသားထုအတွက် တစ်သက်တာလုံး ရင်ကိုအေးမြစေသည်။ လူမှုဒုက္ခ သုက္ခ အရှုပ်အထွေးများအတွက် ဗုဒ္ဓ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဒေသနာတော်သည် အတိက်ကထက် ယနေ့တွင် ပို၍လိုအပ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓနှင့်ပတ်သက်၍ အထင်ရှားဆုံးအရာကား တည်ကြည်သည့် သမာဓိ၊ ပညာ၊ နွေးထွေးသော မေတ္တာ၊ နက်နဲသော ကရုဏာ တို့၏ ထူးကဲသော ပေါင်းစပ်မှုပင် ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓတစ်ဦးတည်းသာ လူ့သဘာဝ ကောင်းဆိုးသိစိတ်ကို ကိုယ်စားပြုသဖြင့် ယနေ့ကမ္ဘာသည် ဗုဒ္ဓဆီသို့ ပို၍ ပို၍ပင် ဦးလှည့်လာလေပြီ။
ဗုဒ္ဓသည် အပြစ် ( sin ) ကို မဟောပါ
စိတ်တည်ကြည်မှုနှင့် သတ္တ၀ါအားလုံးအပေါ် မြတ်နိုးမှုကို ဗုဒ္ဓနှစ်သက်တော်မူသည်။ ဗုဒ္ဓသည် အပြစ်ဟူသော sin ကို မဟော ပါ။ အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့မှုနှင့် တွေဝေ မိုက်မဲမှုတို့ကိုသာ ဟောကြားပြီး ယင်းတို့ကို အသိပညာ၊ ကရုဏာတို့ဖြင့် ကုစားနိုင်ကြောင်းကို သာ ဟောကြားတော်မူသည်။
(Dr. S Radhakisnan)
ဗုဒ္ဓကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာ ပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ လူသားထုတစ်ရပ်လုံး ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာတော်သည် လူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူပြီး နောက်ပိုင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဘာသာတရားတိုင်းသည် ဗုဒ္ဓထံမှ ကောင်းမွန်သည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ချေးငှားရယူထားကြသည်။
(A Muslim Scholar)
ဘာသာတရားတို့၏ မိခင် အတွေးအမြင်ကြွယ်ဝသည့် အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများသည် စင်စစ် လှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်တတ်သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သတ်၍မူ ကျွန်ုပ်တို့အား မှန်ကန်စွာဖွင့်ဆိုမှု ပေးပါသည်။ အကြောင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့အား လူ့သဘာဝ၏အတွင်းပိုင်းတွင် တည်ရှိနေသည့် ကိုယ်ကျင့်တရားအလှနှင့် ဖြူစင်မှု ( ၀ိသုဒ္ဓိ )ကို သိရှိစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ရှင်သန်သည့် ဂုဏ်အသရေ အဖြစ် နိုးကြားလာစေရန် လူ့နှလုံးသားတွင် ကိန်းဝပ်နေသည့် အရာမှတစ်ပါး အခြားသော တန်းခိုးတော် ( ဖန်ဆင်းရှင် ) မလိုအပ်ကြောင်း သိရှိစေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟုပင်ဆိုဆို၊ မဟုတ်ဟုပင်ပြောပြော ကျွန်ုပ်သည် ကမ္ဘာ့ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရေးစနစ်အသီးသီး ကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ဖူးပါ၏။ ဗုဒ္ဓ၏ အရိယမဂ္ဂင် ၈ ပါးနှင့် သစ္စာ ၄ ပါး တရားထက် ထူးကဲသာလွန်သည့် လှပစွာ ခြုံငုံမိသောအရာကို မည်သည့်ဘာသာတွင်မျှ မတွေ့ရှိရချေ။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ထိုလမ်းစဉ်အတိုင်း မိမိ၏ဘ၀ကို ပြုပြင်နေထိုင်ရသည်ကို ကျေနပ်မိပါသည်။
(Prof. Rhys Davids)
ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် စိတ်ကူးယဉ်လောကသို့ ဦးမတည်ပါ
ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် လောကနှင့်ဘ၀၏ တကယ်ပကတိအဖြစ်မှန်ကိုသာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရကား သဘာဝဓမ္မအတိုင်း ရှုမြင်သော ၀ါဒဟု ဆိုရပေမည်။ ၎င်းဝါဒသည် အကြောင်းအရာ ဟူသမျှကို ယထာဘူတကျအောင် လေ့လာသုံးသပ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် စိတ်ကူးယဉ်လောက၌ မေ့လျော့ပျော်ပါးနေစေရန် မှောက်မှားသော နှစ်သိမ့်မှုကိုလည်း မပေး၊ အပြစ်များ အန္တရာယ်များကို တွေးတော၍ စိုးရိမ်သောကရောက်နေအောင် ချောက်လှန့် နှိပ်စက်မှုလည်း မပြု၊ မိမိ၏ ပကတိ အစစ်အမှန်ကို အတိအကျ ယထာဘူတကျကျ ပြောပြ၍ လုံးဝလွတ်လပ်ရေး တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ရေးကို ရရှိနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပြသပေးပေသည်။
(Ven. Dr. W. Raha
အမှားတွေလုပ်မိသော်လည်း တချို့ ချကိချင်း ဆိုးကျိူးမပေးသေးဘူးwhy?
—• ဘုရားသော်မှ ဟောမရဘူး •—
ဘုရားသော်မှ၊ ဟောမရဘူး ။—(မဃဒေဝ ၊ ပိုဒ်ရေ ၊ ၂၂၉)
ယောက်ျားမိန်းမ မည်သူမဆို ပျက်စီးတော့မည်ဆိုလျှင်
အရာရာ၌ အမှားမှား အယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်နေတတ်သည် ။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို အသိတရားရအောင် ချေချွတ်ဆုံးမလို့ မရချေ ။
“ပျက်စီးတော့မည် ဖြစ်သောကြောင့်” ဖြစ်ပေသည် ။ လူ့လောက၌ လူသားတို့ ပျက်စီးဖို့ရာ အကြောင်းများစွာ ရှိပေသည် ။
ထိုတွင် အပြောအဆို, အလုပ်အကိုင်တို့၌ ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်း, မှားမှားယွင်းယွင်း ဖြစ်ခြင်းတို့သည်လည်း ပျက်စီးဖို့ရာ အကြောင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည် ။ ထို့ကြောင့် ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာ၌
“သတ္တဝါအများစုသည် ပျက်စီးဖို့ အကြောင်းဖန်လာပြီးဆိုလျှင်
“နည်းလမ်း မဟုတ်သည်ကို နည်းမှန် လမ်းမှန်၊
အမှားကို အမှန်၊ အမှန်ကို အမှား”ဟု
သူတို့၏ အသိဉာဏ်၌ လွဲမှားစွာ ထင်မြင်လာတတ်၏”ဟု ပြဆိုထားသည် ။
(ဝဇိရဗုဒ္ဓိဋီကာ ၊ ၆၉)
ထိုသို့ လွဲမှားစွာ ထင်မြင်မိ၍ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်သော အမှုကိုပြုလုပ် ကျူးလွန်မိသောကြောင့် ယူဇနာ ခြောက်ဆယ်ရှိသော ကုမ္ဘဝတီတစ်ပြည်လုံး ပျက်စီးခဲ့ရဖူးသည် ။ • အမှားကြာ အမှန်ဖြစ် •
ရှေးအခါက ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီး မင်းပြုစဉ် ဘုရားလောင်းသည် “သရဘင်္ဂ”မည်သော ရသေ့ဖြစ်၍ တပည့်ပေါင်းများစွာတို့၏ ဆရာကြီးဖြစ်၏ ။
တပည့်ပရိသတ်တို့ များလွန်းသော ဆရာကြီးသည် တပည့်ကြီးတို့ကို ခေါင်းဆောင်ခန့်၍ ရသေ့တို့ကို ဒေသအသီးသီးသို့ စေလွှတ်၏။ ထိုတပည့်တို့တွင် အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်လောင်း ရှင်ကိသဝစ္ဆရသေ့သည် ဒဏ္ဍကီမင်း၏နိုင်ငံ ကုမ္ဘဝတီမြို့၌ စစ်သူကြီးကို အမှီပြု၍ မင်းဥယျာဉ်၌ နေ၏ ။
တစ်နေ့သ၌ ဒဏ္ဍကီမင်းသည် ချီးမြှောက်ထားအပ်သော
ပြည့်တန်ဆာမ တစ်ယောက်ကို ရာထူးမှ ချထားလိုက်သည် ။
ပြည့်တန်ဆာမသည် ရာထူးမှ အချခံရသောကြောင့် စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်လျက် မင်းဥယျာဉ်သို့ ထွက်လာရာ ရှင်ကိသဝစ္ဆရသေ့ကို တွေ့သည် ။
ထိုအခါ ပြည့်တန်ဆာမသည် ရသေ့ကို “သူယုတ်”ဟု မှတ်ထင်၍ ရသေ့၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌ ချွဲသလိပ်တို့ကို ထွေးချကာ ဆံကျစ်ကြားမှာလည်း ဒန်ပူ(သွားတိုက်တံ)ကို ပစ်ချခဲ့သည် ။
ထို့နောက် ဒဏ္ဍကီမင်းသည် ပြည့်တန်ဆာမကို ပြန်လည်သတိရ၍ မူလရာထူးကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည် ။
ထိုအခါ ပြည့်တန်ဆာမသည် “ရသေ့ကိုယ်ပေါ်၌ အညစ်အကြေးများ စွန့်ပစ်သောကြောင့် မူလရာထူး ပြန်လည်ရရှိသည်”ဟု မှားယွင်းစွာ မှတ်ထင်သွားသည်။ ဒဏ္ဍကီမင်းသည် ပုရောဟိတ်ကိုလည်း ရာထူးမှ ချပြန်သည် ။
“မူလရာထူး ပြန်လည်ရရှိရန် မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်နည်း”ဟု
ပြည့်တန်ဆာမထံ နည်းစနစ်များ တောင်းခံခဲ့သည် ။
ပြည့်တန်ဆာမက “မင်းဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ရသေ့၏ ကိုယ်ပေါ်၌ အညစ်အကြေးများ စွန့်ပစ်ရမည်”ဟု နည်းပေးလိုက်သည် ။
ပုရောဟိတ်လည်း ပြည့်တန်ဆာမ ပေးသောနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ရာ ကံအားလျော်စွာ မူလရာထူးကို ပြန်ရခဲ့သည် ။ ထို့နောက် စစ်တိုက်သွားမည့် ဒဏ္ဍကီမင်းကိုလည်း
ပုရောဟိတ်က “စစ်အောင်မြင်ဖို့ရန် ရသေ့အပေါ် အညစ်အကြေးများ စွန့်ပစ်ကြရမည်” ဟု နည်းပေးပြန်သည် ။
ပုရောဟိတ်ပေးသော နည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ကာ စစ်တိုက်ထွက်သွားကြသည် ။ မင်းကြီး ထွက်သွားပြီးနောက် မကြာမီ စစ်သူကြီး ရောက်ရှိလာပြီး ရသေ့မြတ်၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အညစ်အကြေးများ ဖယ်ရှားပေးပြီး ကောင်းမွန်စွာ ရေချိုးပေးလိုက်သည် ။
စစ်သူကြီးက ရသေ့မြတ်ကို “မင်းအား မည်သို့ ဖြစ်လတ္တံ့နည်း”ဟု မေး၏ ။ ထိုအခါ
ရသေ့က “ဒါယကာ၊ ငါသည် တစ်စုံတစ်ရာ အမျက်မထွက်ပါ ။ (စိတ်မဆိုးပါ။)
ဤနေ့မှ ခုနစ်ရက် မြောက်သောနေ့၌ တိုင်းပြည် ပျက်စီးလတ္တံ့။ သင်သည်
သားမယားတို့ကို ခေါ်၍ တိုင်းတစ်ပါးသို့ ထွက်ပြေးပါလော့”ဟု ပြောကြားသည် ။ စစ်တိုက်သွားသော ဒဏ္ဍကီမင်းသည်
ကံအားလျော်စွာ စစ်နိုင်ကာ တိုင်းပြည်သို့ ပြန်လာခဲ့သည် ။
ဒဏ္ဍကီမင်း တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ရောက်လာလျှင်
နတ်တို့သည် ရှေးဦးစွာ မိုးရွာစေ၏ ။
သဲဖြူမိုး၊ နတ်ပန်းမိုး၊ ပဲမိုး၊ အသပြာ ရွှေမိုး,ငွေမိုး၊ နတ်ဝတ် တန်ဆာမိုးတို့ကို အစဉ်အတိုင်း ရွာစေ၏ ။
ထိုအခါ လူတို့သည် ရွာချအပ်သော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကောက်ယူကြကုန်၏ ။
ထိုစဉ် လက်နက်မိုး ရွာချလိုက်ရာ ခန္ဓာကိုယ်တို့သည် အပိုင်းအပိုင်း ပြတ်ကုန်၏ ။
ထို့နောက် မီးကျီးမိုး၊ တောင်ထွတ်မိုး၊ သဲမိုးတို့ ရွာချပြန်ရာ ယူဇနာခြောက်ဆယ်ရှိသော ကုမ္ဘဝတီမြို့ကြီးသည် ပျက်စီးလေ၏ ။
(သရဘင်္ဂဇာတ်၊ ဇာ၊ ၂၊ ၅။ ဇာ၊ ဋ္ဌ၊ ၅၊ ၁၄၁)
ကုမ္ဘဝတီမြို့ကြီး ပျက်စီးရခြင်း အကြောင်းကား
မပြစ်မှားထိုက်သည်ကို ပြစ်မှားသောကြောင့် ဖြစ်သည် ။
လောက၌ လူတို့သည် အယူဝါဒတစ်ခု
ယုံကြည်မှုတစ်ခုသည် မှားပင်မှားနေသော်လည်း အမှားကြာ အမှန်ဖြစ်” ဆိုသည့်အတိုင်း
ထိုအယူဝါဒ, ယုံကြည်မှုကို “အမှန်”ဟု လွဲမှားစွာ အောက်မေ့မှတ်ထင် တတ်ကြကုန်၏ ။
ပြည့်တန်ဆာမ, ပုရောဟိတ်, မင်းနှင့်တကွ စစ်သည်တော်တို့သည်
နှပ်တံတွေးစသော မစင်အညစ်အကြေးများ စွန့်ပစ်ကြသည် ။
ဤသို့ပြုလုပ်ကြခြင်းသည် “အမှားပင်” ဖြစ်သည် ။
“အစစအရာရာ အောင်မြင်သည်၊ လာဘ်ကီး ကောင်းသည်”ဟု
သူတို့လုပ်တာ “အမှန်”ဟု မှတ်ထင်နေကြလေသည် ။
ဤသို့ အလွဲလွဲ အချော်ချော် မှတ်ထင်ခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်း၏ အကြောင်းပင်ဖြစ်တော့သည် ။ ဤဇာတ်ဝတ္ထုကို ဖတ်ရှုရာ၌
မကောင်းမှုသည် တစ်ခါတစ်ရံ ချက်ချင်းအကျိုး မပေးသေးဘဲ
ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန် မြင်တတ်ကြောင်း ဘဝသင်ခန်းစာ ရရှိသည် ။ ချမ်းမြေ့ကြပါစေ